युगसम्बाद साप्ताहिक - भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध
Saturday, 10.19.2019, 01:09am (GMT+5.5) Home Contact
भारतको बन्दुक, कांग्रेस–माओवादीको काँध
Tuesday, 07.19.2016, 10:33am (GMT+5.5)
काठमाडौं । भारत जे चाहन्थ्यो त्यही भयो । नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच केपी ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्ने खेल आन्तरिक राजनीतिक कसरत र आवश्यकताको उपज नभै भारत प्रकट भएको कुरा अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएपछि काठमाडौंस्थित भारतीय दूताबासमा चलेको भोजले नै स्पष्ट गर्दछ । यी दुई पार्टीको काँधमा बन्दुक राखेर भारतले ओली सरकारको टाउकामा गोली हान्यो । कांग्रेस र माओवादीबीच सात बुँदे सम्झौता भएको छ ।
दुई पार्टीबीच भएको ७ बुँदे पनि यसअघि नै दिल्लीमै तयार भएको खुलासा भएको छ । जतिबेला शेरबहादुर देउवा पत्नी आरजुको उपचारका लागि दिल्ली गएका थिए त्यति नै बेला माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा पनि दिल्ली पुगे र त्यही त्यो सम्झौता भएको रक्षा मन्त्री भीम रावलले खुलासा गर्नुभयो । दिल्लीबाट फर्केपछि सरकार ढाल्ने खेल सुरु भयो । तर, ओलीले रोकिदिए । अहिले सकेनन् ।
भारतको नाकाबन्दीको डटेर सामना गर्नु र चीनसंग व्यापार तथा पारवहन सम्झौता गर्ने बाहेक ओली सरकारले जनताको जीवनस्तर उकास्ने र सहज बनाउने कुनै काम गरेको थिएन । यसैको बहानामा सरकार परिवर्तनको खेल रचिएको देखिए पनि वास्तवमा त्यो भारतको चाहना अनुसार भएको नेपाल मजदूर किसान पार्टीका अध्यक्ष नारायणमान विजुक्छेको विश्लेषण छ । (हेर्नुहोस् अन्तवार्ता पृष्ठ ३ मा)
विजुक्छेको विश्लेषण छ– अहिलेको परिस्थिति एकाएक आएको हैन । यसअघि पनि आएको थियो । दृश्य देख्दा कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले सरकार बनाउन खोजेजस्तो देखिए पनि यसभित्रको खेल अर्को छ । ग्रीसको युद्धमा प्रयोग भएजस्तै भारतको ट्रोजन हर्सका रुपमा माओवादी प्रयोग भएको छ । तर, त्यतिबेला प्रधानमन्त्री ओलीले रोकिदिए । त्यसअघि कृष्णबहादुर महरा दिल्ली गएका थिए । निम्तो त प्रचण्डलाई नै थियो । उहाँ आफैं जान नमिल्ले भएर महरालाई पठाइयो । त्यसको साथै शेरबहादुर देउवा पुगे । जहाँसम्म खुसीले उफ्रने मधेशबादी दलहरूको त कुरा गर्नै परेन । यी सबै एउटै लाइनमा छन् । यस कारण यो सामान्य कुरा होइन । मधेशवादीले त आफूलाई काठमाडौंभन्दा दिल्लीलाई नै नजिक ठान्छ । तर, भारतसंग सुरुङ युद्धको शंखनाद गर्ने प्रचण्ड भने काठको घोडा नै रहेछन । युद्धकालमा पनि भारतको बिरोध गर्दै जनता भुलाउँदै भारतमै बसे ।
अहिले भारत त्यसैको ब्याज प्रचण्डबाट खोजिरहेको छ । काठको घोडा जसरी उपयोग गरेर । प्रचण्डको अस्थिर मनस्थिति पनि भारतको उपयोगमा आउने एउटा कारण हो । उनी देश र जनताको पक्षमा लाग्न थाले कि वा माओवादीलाई आफ्नो ठानेर जनता जव नजिक पुग्छन् अनि त्यो काठको घोडाबाट लडाकु निस्केजस्तो भारत निस्केर नेपालीलाई कब्जा गर्छ ।
उहाँ भन्नुहुन्छ– कांग्रेसको बिषयमा त हामीले बिद्यार्थी कालमै २०१२।०१३ सालमै क्लास लिंदा खेरी नै भारतीय एकाधिकार पूँजी परस्त शक्ति हो भन्ने बुझेका हौं । भारतपरस्त भनेको राम्रो शब्दमा भनेको हो, त्यसको अर्थ पूजा गर्ने भन्ने लाग्छ । नराम्रो शब्दमा भन्ने हो भने यो एजेन्ट वा दलाल हो भन्ने अर्थ लाग्छ । किन त भन्दा नेपाली कंग्रेसले गरेका अहिलेसम्मका सन्धि सम्झौताहरू सबै भारतका पक्षमा छन् । ऊ जे गर्छ नेपाल भन्दा धेरै भारतको पक्षमा निर्णय गर्छ । भारतको प्रमुख सेवक नै हो कांग्रेस ।
मधेशबादी दलहरूको कुरा गर्नु ? उनीहरूको यस्तो अनुहार देखिन्छ– मोहीयानी हक छैन, जमिन जोत्नेको गर्नु प¥यो, रोजगारी छैन, सिंचाईको बन्दोबस्त छैन, दहेज प्रथालाई हटाउन प¥यो भन्ने त्यहाँका जनताको माग हो । त्यो माग एक शब्द पनि उनीहरूको मागमा छैन । उनीहरूको मागमा भरर्खरै नागरिकता पाएका बिदेशीहरूलाई नेपाली सरहको नागरिकता दिनुपर्छ भन्ने छ । ती भर्खरै नागरिकता लिएकाले राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, प्रधानन्यायाधीश पाउनु प¥यो भन्छन् । यी मधेशी जनताका मान्छे हुन् कि भारतका ?
हाम्रोजस्तो सानो, गरिव र राजनैतिक चेतना नभएको देशमा त्यसरी नागरिकता दिने हो भने भोलि त्यहाँका टाटा–बिडलाहरू आएर पैसाले चुनाव जित्छन् । अनि त्यसको परिणम के होला ? के हुन्छ देशको अबस्था ? अहिले नै हामी आधा जनसंख्या छौं भनिरहेका छन् । यो अवस्थामा यहाँका नेताहरू पनि त्यस्तै भएको हुँदा कुनै पनि बेला देश उनीहरूको हातमा जाने अवस्था छ ।
त्यसकारण संबिधान संशोधन गरेर उनीहरूको माग पूरा गर्ने भन्नुको मतलब देशलाई घात गर्ने नै हो । त्यसको बिरोधमै जनता सचेत हुन जरुरी छ । भोलि होइन, आजै सडकमा जाऔं । यो देशभक्तिको कुरा हो । जनताले बुझ्न थाले कि भारतले नेपाली जनताको लागि हैन कि सबै काम उसले आफ्नो हितमा गरिरहेको छ । दुईटा राज्य भएसम्म आ–आफ्नो हित खोज्नु स्वभाविकै हो ।
तर हाम्रो देशमा हाम्रो सरकारमा उसले उसको हित खोज्ने होइन नि । यहाँ त भारतले आफ्नो हित हेर्दा विरोध ग¥यो भनेर हल्ला चलाइन्छ । ठीक छ उसले उसको हित हेर्ने हो, हामीले मानेका छौं तर, हाम्रो देशका लागि गर्ने काममा पनि भारतको हित हेर्नु पर्छ भन्नेहरूलाई दलाल नभनेर के भन्ने ? दुबैको विनविन हुने ब्यापारजस्तो विषयमा लागू हुन्छ । तर जहाँ देशको हितको कुरा आउँछ आफ्नो देश र जनताको हित सोच्ने हो ।
अहिले प्रचण्डले र नेपाली कांग्रेसले जे गरिरहेका छन् त्यो न ब्यापारको कुरा छ न देश हितको कुरा छ । जे भैरहेको छ सबै भारतको हितमा काम भैरहेको छ । गएको केही महिना यता भारत पछि हटिसकेको थियो । पछि नहटी नहुने अबस्था आएको थियो । तर फेरि उसले चाल बदल्यो । हामी संबिधानलाई मान्छौ भन्दै आयो । त्यो भनेको अब यो नेपालीहरूसँग टसल गरेर हुँदैन यिनीहरूलाई फेरि फकाउनु प¥यो भनेर फकाउन खोजेको हो । तर चाल चै त्यही हो ।